Isikhunta sihlangabezana nezidingo zenqubo yokusebenza
Ukukhiqizwa kwesikhunta ngokuvamile kubandakanya izinqubo eziningana njengokufaka, ukusika, nokwelashwa kokushisa. Ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yokukhiqizwa kwesikhunta futhi kunciphise izindleko zokukhiqiza, okubalulekile kufanele kube nokukhohlisa okuhle, ukusebenza kahle, ukuqina, i-harde ...
Izimiso Eziyisithupha Zokukhethwa Kwesikhunta
1. Gqoka ukumelana Lapho okungenalutho kukhubazeke ngoplastikhi embotsheni yesikhunta, igeleza futhi islayidele ebusweni bomgodi, okudala ukungqubuzana okunodlame phakathi kobuso bomgodi kanye nalutho, okwenza ukuthi isikhunta sehluleke ngenxa yokugqoka. Ngakho-ke, ukugqoka kabusha ...
Umakhi Wezimoto EChina
I-Aojie inemugqa wokukhiqiza osezingeni eliphakeme kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi ephelele. Le nkampani ingumhlinzeki oqeqeshiwe wezingxenye zezimoto ezizenzakalelayo eChina, isebenzisa uhlelo lwe-CAD / CAM / CAE lomhlaba jikelele; lonke ulwazi kunethiwekhi yendawo lungashintshaniswa futhi kwabelwane ngalo; ukwenza isikhunta nge CNC m ...
Amazinga Amathathu Okokusebenza Kwesikhunta Sokukhetha
(1) Ukumelana nokugqwala Lapho ezinye izikhunta ezinjengezikhunta zepulasitiki zisebenza, ngenxa yobukhona be-chlorine, i-fluorine nezinye izinto kuplastikhi, amagesi aqinile anamandla afana ne-hci ne-hf azoxazululwa ngemuva kokufudunyezwa, okuzokonakalisa indawo we-mol ...